LAHATSARY: Ao Bolivia, Mitantara Fohy Ny Fiarahamonina Ao Aminy Ireo Vehivavy Teratany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Marsa 2013 14:36 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, Français, 繁體中文, 简体中文, Español
MPitarika amin'ny vondro-piaraha-monina teratany ao Cochabamba, Bolivia i Marisol, izay voatery hifindra tao an-tanàna mba hitady zavatra mahasoa sy tsaratsara kokoa tahaka ireo vehivavy indizeny maro. Iray amin'ireo vehivavy maneho ny heviny ao amin'ireo andian-dahatsary fanadihadiana avy amin'i Periodismo Humano [es] momba ny vehivavy ao amin'ny fiarahamonina Boliviana izy. “Ianao vehivavy sady teratany no mahafadiranovana indrindra eto ,” hoy izy.
Nitantara ny zava-misy ireo vehivavy natao fanadihadiana manerana ny nosy fa ananan-trosa ny fananana krômôzôma X anankiroa ao Bolivia. Tsy dia nandia fianarana firy ny vehivavy ary tsy dia mampidi-bola firy, ary na nahitana fitomboana aza ny fandraisan'anjaran'ny vehivavy eo amin'ny sehatra politika, mbola mitolona amin'ny tokony hihainoana ny fanehoa-keviny ireo vehivavy mpitarika ao Bolivia.
Mario Munera Rodríguez, mpanao gazety sy nanatontosa ilay andian-dahatsary, nanoratra hoe [es]:
Ny maodely sosialy nahatonga ny vehivavy Boliviana tsy dia misongadina dia noho ny fifangaroana etsy andaniny, eo amin'izay faritana fa agringados na ireo te-haka tahaka ny fomba fiainana kapitalista (amin'ny fomba fijeriny), ary etsy ankilany eo amin'ireo izay manam-piaviana ary mandà tsy hiala amin'izany (fiaviana) kosa.
Miresaka momba ireo tovovavy sy ny fidirany an-tsekoly kosa ny lahatsary faharoa [es]. Hoy i Munera nitatitra tao amin'ny lahatsary:
Araka ny voalazan'ny INE (Ivon-toerana Nasionaly misahana ny antontanisa) tamin'ny 2001 tao Bolivia, 19,35% ny tahan'ny tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra ho an'ny vehivavy, ary 6,94% kosa ny tahan'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra ho an'ny lehilahy eny ambanivohitra. Ao andrenivohitra kosa dia 37,91% ny tahan'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra ho an'ny vehivavy ary 14,42% ny lehilahy.
Zava-dehibe ny fampianarana ny vehivavy. Miantraika mivantana amin'ny taham-pahasalamana, ny sakafo sy ny fivelomanan'ny ankizy ny fampidirana ny vehivavy an-tsekoly. Miantraika amin'ny fahafatesan'ny vehivavy miteraka ihany koa izany.
Nilaza i Sonia, mpahay fiarahamonina nohadihadiana tao amin'ny lahatsary fa “manabaty vehivavy tanteraka ny fampianarana ao Bolivia. Raha ny tena marina, tsy omena lanjany ny tovovavy.”
Amin'ny lahatsary fahatelo, nanararaotra ny fandraisan'anjaran'ny vehivavy amin'ny politika [es] i Munera. Ahitana ity fomba fiteny ity ny lahatsoratra hita ao amin'ny lahatsary:
“Maro ireo voatery mampiasa herisetra mba hohajaina, sy hanisy fetrany eo amin'ireo lehilahy.”
“Mihevitra ny lehilahy fa fialam-bolin'izy ireo ny vehivavy, na dia amin'izany toe-javatra izany aza, voakasika ihany koa ireo mpiara miasa amin'ny sehatra politika.”
“Mitady vehivavy hampiasana amin'ny politika sy ho kandidà amin'ny governemanta ireo lehilahy ary angamba miezaka hanatratra 30% amin'ny fandraisan'anjaran'ny vehivavy, fa saingy amin'ny alalan'ny fanendrena ihany.”
“Mbola ny lehilahy no manapa-kevitra fa mananga-tanana fotsiny ny vehivavy.”
“Niara-nidinika tamin'ireo avara-pianarana sy ideology (mpisaina) maro sy mpandinika avy amin'ny ankavia amin'izay ilaina andehanana ny governemanta.”
” Ireo nanontany momba ny politikan'ny governemanta, tsy amin'ny fomba mandrava sy tsy avy amin'ny antoko ankavanana dia ny fikambanam-behivavy”.
Farany, amin'ny lahatsary faha-efatra sady farany [es], nanipika i Munera fa “70%-n'ny herisetra ara-nofo sy manabanty vehivavy momba ny hetraketraka nitranga tao amin'ny firenena.” Tamin'ireo andianà fanadihadiana, nanazava ny toe-javatra iainan'ireo vehivavy iharan'ny herisetra ataon'ny lehilahy monina ao Bolivia ny mpandrindra, ny mpahay fiarahamonina ary ny mpahay momba ny toe-tsaina.
Faranan'ireo andianà sary fotsy sy mainty ny lahatsary, saingy nolazaina teny amboalohany fa: “Tsy misy lehilahy te-handray anjara tamin'ny fanatontosana ity lahatsary fanadihadiana ity.”
Niara-niasa tamin'ny fanomezana dikan-dahatsoratra tamin'ireo lahatsary i Azucena Ramos, Jaime Fraire, Libanez, Maggie S, sy i Molly Allison-Baker.
Tamin'ny teny espaniola no nandefasana ity lahatsary ity tany am-boalohany tamin'ny volana marsa 2012.